MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Roaming နှင့် နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ပြည်ပခရီးသွားစဉ် MPT မိုဘိုင်းအသုံးပြုခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု
တခြားနိုင်ငံ ကို ခရီးတွေသွားနေလည်း မိမိရဲ့ မိသားစု ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရလေအောင် MPT နှင့်အတူဆက်သွယ်လိုက်ရအောင်။ ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / ထိုင်ဝမ် / ဟောင်ကောင် /မကာအို /စင်္ကာပူ တို့အတွက် Special package ရှိနေပါပြီ။ Package ထဲမှာ Data ပါပြီးသားဆိုတော့ ဘာလိုသေးတော့လို့လဲ။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်
ရရှိနိုင်သော နိုင်ငံများ ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / ထိုင်ဝမ် / ဟောင်ကောင် /မကာအို /စင်္ကာပူ ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / ထိုင်ဝမ် / ဟောင်ကောင် /မကာအို /စင်္ကာပူ
ပရိုမိုးရှင်းကာလ မတ်လ ၃၁ ရက်မှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်အတွင်း မတ်လ ၃၁ ရက်မှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်အတွင်း
ASEAN & 8 Country Code Region Local Call Calls to Myanmar Call to 3rd country All Incoming Calls SMS Ks/MB (Data)
1. Bangladesh 880 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
2. Cambodia 855 ASEAN 900 1000 1500 700 400 1000
3. Hong Kong 852 E Asia & India 900 1500 1500 700 400 1000
4. India 91 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
5. Indonesia 62 ASEAN 900 1000 1500 700 400 –
6. Japan 81 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
7. Malaysia 60 ASEAN 150 200 500 Free 50 15
8. Philippines 63 ASEAN 900 1000 1500 700 400 –
9. Singapore 65 ASEAN 900 1000 1500 700 400 15
10. South Korea 82 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 2500
11. Thailand 66 ASEAN 500 500 1500 300 400 15
Asia +8 Brunei (00)673 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Cambodia (00)855 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 India (00)91 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 Indonesia (001)62 900 1000 1500 700 400 -
Asia +8 Japan (010)81 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 Laos (00)856 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Macau (00)853 1200 3000 4000 1200 400 -
Asia +8 Malaysia (00)60 150 200 500 Free 50 15
Asia +8 Philippines (00)63 900 1000 1500 700 400 -
Asia +8 South Korea (001)82 900 1000 1500 700 400 2500
Asia +8 Taiwan (002)886 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Vietnam (00)84 1200 3000 4000 1200 400 5000
Asia +8 HongKong (001)852 900 1000 1500 700 400 1000
East and South Asia Mongolia (001)976 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Papua New Guinea (05)675 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Timor-Leste 670 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Iran (00)98 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Iraq (00)964 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Bahrain (00)973 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Oman (00)968 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Jordan (00)962 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Saudi Arabia (00)966 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Turky (00)90 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East UAE (00)971 1400 3500 4000 1400 500 15000
East and South Asia Bhutan (00)975 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Nepal (00)977 1400 3500 4000 1400 500 15000
East and South Asia Maldives (00)960 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Pakistan (00)92 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Sri Lanka (00)94 1400 3500 4000 1400 500 5000
Europe Portugal (00) 351 1800 4500 5000 1800 700 -
Europe Russia (810)71800 4500 5000 1800 700 -
Europe Spain (00) 34 1800 4500 5000 1800 700 8000
Europe Germany (00)49 2000 5000 5000 2000 700 8000
Europe Italy (00)39 2000 5000 5000 2000 700 15000
Europe France (00)33 2000 5000 5000 2000 700 5000
Europe United Kingdom (00)44 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Switzerland (00)41 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Greece (00)30 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Norway (00)47 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Poland (00)48 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Austria (00)43 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Sweden (00)46 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Czech Republic (00)420 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Iceland (00)354 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Finland (00)358 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Hungary (00)36 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Cyprus (00)357 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Romania (00)40 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Luxembourg (00)352 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Albania (00)355 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Belarus (810)375 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Moldova (00)373 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Slovakia (00)421 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Liechtenstein (00)423 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Denmark (00)45 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Netherlands (00)31 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Latvia 247 2000 5000 5000 2000 700 2500
Australia Australia (0011)61 2000 5000 5000 2000 700 -
Australia New Zealand (00)64 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Egypt (00)20 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Morocco (00)212 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa South Africa (09)27 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Mauritius (020)230 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Ghana (00)223 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Tunisia (00)216 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Senegal (00)221 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Uganda (000)256 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Mauritania (00)222 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Swaziland (00)268 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Réunion (00)262 2000 5000 5000 2000 700 -
America USA (011)1 2000 5000 5000 2000 700 1000
America Canada (011)1 2000 5000 5000 2000 700 15000
America Mexico (00)52 2000 5000 5000 2000 700 -
America Brazil (0014)55 2000 5000 5000 2000 700 -
၁။ ဒီပက်ကေ့ချ်ကို နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာလား?
အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။ ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်ထားသော ထိုင်း/မလေးရှား/တရုတ်(ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုမှလွဲ၍)/စင်္ကာပူနိုင်ငံများမှာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒီပရိုမိုးရှင်းကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မှာလဲ?
သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အလိုလျောက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ data roaming ပက်ကေ့ချ်ကိုတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
က။ *8007# (သို့) *106*2*5# သို့ ခေါ်ဆိုရန်
ခ။ 1332 သို့ “ROAM” ဟု ပို့ရန်
၃။ ပရိုမိုးရှင်းကို အောင်မြင်စွာ ဝယ်ယူပြီးပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကို အောင်မြင်စွာ ဝယ်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်း SMS လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်အတွက်ဆိုလျှင် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ထိုင်း/မလေးရှား/တရုတ်/စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်းမှာ ရောက်ရှိနေလျှင် MPT မှပို့သော SMS အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပရိုမိုးရှင်းထဲမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS ပေးပို့ခြင်းနှင့် အဝင်ဖုန်းလက်ခံခြင်းများပါ ပါဝင်မှာလား?
ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ Data roaming အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းနှုန်းထားများကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံများ အမျိုးအစားများ နှုန်းထား ကျပ်/မိနစ်
ထိုင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နိုင်ငံတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၅၀၀
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၅၀၀
အခြားနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၁၅၀၀
မလေးရှား ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နိုင်ငံတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၁၅၀
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၂၀၀
အခြားနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၅၀၀
တရုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နိုင်ငံတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၁၂၀၀
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၃၀၀၀
အခြားနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၄၀၀၀
စင်္ကာပူ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နိုင်ငံတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၉၀၀
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၁၀၀၀
၅။ ဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို မသွားခင် ပက်ကေ့ချ်ကို ကြိုတင်ဝယ်ယူသွားရမှာလား?
ဖော်ပြထားသော နိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိပြီးမှဖြစ်စေ၊ မသွားခင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်စေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MPT မှ နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ (IDD)ကို ယခင်ထက် ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT မှ သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်၍ စျေးနှုန်းသက်သာသော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလိုသောကြောင့် နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခများကို စျေးလျှော့ချထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှုန်းထားအသစ်များကို နိုင်ငံ၏ တည်နေရာဇုံအပေါ်မူတည်၍ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၈၀၀ ကျပ် အထိ စျေးနှုန်း သတ်မှတ်မှု (၅)မျိုး ခွဲ၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံများနှင့် အခြား ၈ နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ယိုးဒယားနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများထံသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့်သာ ခေါ်ဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
“All in one IDD Promo pack” ကို ၄၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားပါက ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက်(၃၀)အတွင်း ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / စင်ကာပူ / ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် / အိန္ဒိယ / တောင်ကိုးရီးယား/ ဂျပန် / သြစတြေးလျ / ဟောင်ကောင် / အမေရိက / ကနေဒါ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လက်ရှိနှုန်းထားများ အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
1 Anguilla (Br.) 800 150
1 Antigua and Barbuda 800 150
41 Switzerland 600 150
56 Chile 800 150
213 Algeria 800 150
216 Tunisia 800 150
220 Gambia 8400 150
222 Mauritania 800 150
227 Niger 800 150
246 British indian 800 150
356 Malta 600 150
372 Estonia 600 150
381 Serbia 800 150
387 Bosnia 800 150
500 Falkland Islands 800 150
509 Haiti 8400 150
597 Suriname 8400 150
599 Netherlands Antilles 600 150
670 East Timor 400 150
674 Nauru 8400 150
675 Papua New Guinea 8400 150
676 Tonga 8400 150
677 Solomon Islands 8400 150
678 Vanuatu 8400 150
682 Cocos Islands 800 150
683 Niue Island 8400 150
685 Western Samoa 8400 150
686 Kiribati 8400 150
687 New Caledonia 8400 150
688 Tuvalu 8400 150
690 Tokelau 400 150
870 Inmarsat BGAN 800 150
873 Indian Ocean Region 800 150
874 West Atlantic 800 150
878 UPT 800 150
881 Iridlum 800 150
882 International Network 800 150
960 Maldives 400 150
1684 Eastern Samoa (U.S.) 400 150
1809 Dominican Republic - -
Gambia (+220), Haiti (+509), Suriname (+597), Nauru (+674), Papua New Guinea (+675), Tonga (+676), Solomon Islands (+677), Vanuatu (+678), Niue Island (+683), Western Samoa(+685), Kiribati (+686), New Caledonia (+687) နှင့် Tuvalu (+688) တို့အား ခေါ်ဆိုမှုကို(၁)မိနစ်တွင် (၈၄၀၀)ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
Premium ၊ Satellite နှင့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုနံပတ်များသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို အထက်ပါစာရင်းတွင် ပါ၀င်သည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် မတူသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်ငွေသတ်မှတ်ထားသည်။
Data roaming ၀န်ဆောင်မှုတွင် တခြားနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကွန်ယက်ကို သုံးစွဲသူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။သုံးစွဲသူသည် အခြားနို်င်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေ သည့်အချိန်တွင် MPT ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းဖွင့်ထားခြင်း၊ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော apps များကို အသုံးပြုခြင်း တို့ကို data roaming ၀န်ဆောင်မှုတွင် ခွင့်ပြုထားသည်။ ယင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် MPT က သုံးစွဲသူထံမှ ၀န်ဆောင်ခ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
Data Roaming ရယူဖို့အတွက် ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူတွေကတော့ ၁၃၃၂ သို့ RMDON ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၁၃၃၂ သို့ RMDOFF ဟု စာတိုပေးပို့ရမှာပါ။ လစဉ်ပေးစနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူ တွေကတော့ MPT အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်တွေကနေတဆင့် လျှောက်ထားရမှာပါ။ Corporate Post Paid သုံးစွဲသူတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ B2B မန်နေဂျာကဆင့် ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၁၄.၂.၂၀၁၈ မှစ၍ Data Roaming ဝန်ဆောင်မှုအား အလိုလျှောက်ဖွင့်ထားပေးပြီဖြစ်သည်။
၀န်ဆောင်မှုအား ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခြင်း
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်း၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များနှင့် စျေးနှုန်းတို့ကို MPT အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ MPT သည် မည်သည့်အချိန်တွင် မဆို အထက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ အသစ်ပြုပြင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ (website၊ စျေးဆိုင်များ)ထိုမှတဆင့် ကြေညာဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။